Fahatongavan’ny Papa François :: Enina hetsy ireo mpino katolika nisoratra anarana ho avy eto Iarivo • AoRaha
Fahatongavan’ny Papa François Enina hetsy ireo mpino katolika nisoratra anarana ho avy eto Iarivo
Fantatra teny amin’ny Toby Ratsimandrava, nandritra ny fihaonan’ny solontenan’ny komity mpikarakara ny fahatongavan’ny Papa François sy ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Tafika, ny Zandarimaria ary ny Polisim-pirenena fa manodidina ny enina hetsy ireo mpino katolika avy any amin’ny faritra efa voasoratra anarana fa ho tonga eto an-drenivohitra amin’ny fahatongavan’ny Papa François, amin’ny 6 septambra hoavy izao.
Hanomboka amin’ny 2 septambra 2019 ny fiaingan’ireo mpino miala any amin’ny faritra misy azy avy. Fiarakodia miisa efatra arivo mahery no hitondra an’ireo olona ireo, araka ny tomban’ny Antokon-draharaha misahana ny fitanterana an-tanety (Att).
Miisa roa arivo mahery anefa hatreto ireo fiara efa voafandrika. Mbola mitady fiara hatrany amin’ny fitonjato sy arivo mahery any, araka izany, ireo mpino katolika, raha ny voalazan’ny Att teny Andrefan’Ambohijanahary, omaly.
Nangataka ireo lehiben’ny mpitandro filaminana ao amin’ny Emmonat, nosoloin’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa tena, mba tsy hisy hampiasa kamiao ireo mpivavaka amin’io fotoana io. “Aleo mijanona rehefa tsy misy fiara”, hoy izy.
Teknolojia vaovao :: Miroso amin’ny raitra hatrany ireo mpikatroka lalao an-tsolosaina
Tatitra momba ny zon’olombelona :: Fonja telo amby roapolo marefo tanteraka